माओवादी युवा नेता रायमाझी भन्छन् – हामी एमालेसँगको एकतामा जादैनौं — Imandarmedia.com
नेकपा माअाेवादिका युवा नेता जागृत रायमाझीसँगको अन्तर्वार्ताको पूर्णपाठ
चुनावको परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हरेक संसदीय निर्वाचनमा सपनाहरुको व्यापार हुन्छ । विकासको बकम्फुसे नाराहरु तेर्साईन्छ । र, त्यसैको आधारमा जनतालाई आफ्नो लुटेरा छनौट गर्ने अधिकार दिईन्छ । जनता त्यही आशा, सपना र बिकासको अपेक्षामा मतदान गर्न पुग्छन । र, अर्को संसदीय निर्वाचनसम्मको अबधीका लागि आफ्नो लुटेराको छनौट गर्छन् ।
यो निर्वाचनको परिणामलाई योभन्दा फरक ढंगले बुझ्न जरुरी छैन । कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी एमाले वर्गसंघर्ष, सर्वहारा अधिनायकत्व, बल प्रयोगको सिद्धान्त जस्ता मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्त परित्याग गरिसकेको पार्टी हो । माओवादी पनि त्यही पार्टीसँग एकता गर्न तैयार भइसकेको पार्टी हो ।
अन्तत: माओवादी केन्द्र पनि त्यहीँ पुग्यो । त्यसकारण यो पार्टी एकताको विरोधभन्दा पनि विसर्जनवादको बिरोध हो, संसदवादको विरोध हो, मार्क्सवादको रक्षा र विकासको निम्ति गरिएको अपील हो । उहाँहरु एकता गरिनै छाड्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरुलाई गाली वा सराप्‍नुभन्दा शुभकामना नै दिउँ । तर, मार्क्सवाद हामीले छोड्‍यौं, कम्युनिस्ट हामी हुन सकेनौ, सामाजिक जनवादी मोडेलको पार्टी बनाउँछौं भनेर उहाँहरुले भन्‍नुपर्छ ।
मार्क्सवाद र समाजवाद छोडेर त्योभन्दा उन्‍नत अर्को दर्शनसिद्धान्त आविस्कार गरेको भए पो महान् भन्‍नु । आफैले ०४८ सालदेखि धारेहात लगाएर गाली गरेको ब्यवस्थामा चुर्लुम्म डुबेपछि अरु कुनै भाषाले वहाँहरुको चरित्रलाई न्याय गर्न सक्ला र ?
०४८ देखि एमाले कम्युनिस्ट पार्टी होईन भनेर घाँटी सुकाईसुकाई भन्ने माओवादीले कहिलेदेखि के के कर्म गरेबापत एमाले कम्युनिस्ट भयो भनेर कहिले भनेको रहेछ ? मैले यो तथ्य चाहिँ जति खोजे पनि पाईनँ । एमाले सप्रेर कम्युनिस्ट भाको हो कि माओवादी बिग्रेर एमाले भाको हो ? मैले चाहिँ यो प्रश्नको जवाफ माओवादी नेताहरुबाट पाउन सकेको छैन ।